AMISOM Oo Muqdisho dhaq dhaqaaq ka sameysay iyo madaafiic ku dhacday..... Ruunkinet 28/10/2009
Ciidamada Amisom ee fariisimada ku leh Magaalada Muqdisho ayaa saaka waxay ka baxeen xeryihii ay ku jireen, waxayna ku siqeen deegaanno aysan horay u joogi jirin oo ka tirsan Degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ee Gobolka Banaadir.
Ciidamada Amisom oo wata Taangiyo ayaa waxaa ka tallaabeen Isgoysyada Dabka iyo Sayidka, waxayna u dhaqaaqeen dhanka Isgoysyada Bakaaraha iyo Howl-Wadaag oo ah aag aysan ka talin Dowladda Soomaaliya ee ay Ciidamada Amisom difaacaan.
Dhaqdhaqaaqan ay sameeyeen Ciidamada Amisom ayaa wuxuu ka dambeeyay kaddib markii ay saaka xoogagga ka soo horjeeda Dowladda Soomaaliya iyo Ciidamada Amisom ay weerareen fariisin ay Ciidamada Amisom ku leeyihiin Magaalada Muqdisho, gaar ahaan midka ay ku leeyihiin Gurigii Shaqaalaha ee Wadada Makka Al-Mukarrama.
Wax yar kaddib markii ay Ciidamada ka soo baxeen xeryahooda ayaa waxaa bilowday rasaas iyo madaafiic ay isweydaarsanayaan Ciidamada Amisom iyo Xoogagga ka soo horjeeda, kuwaasi oo ku dhacayay qaar ka mid ah Xaafadaha Degmooyinka Hodan iyo Howl-Wadaag ee Gobolka Banaadir.
Lama oga iyo ilaa iyo haatan ujeedada ay Ciidamada Amisom ka leeyihiin dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan, waxaase jira warar aan si rasmi ah loo xaqiijin oo sheegaya in ay saaka soo degayaan qaar ka mid ah Masuuliyiinta sare ee Dowladda Soomaaliya oo dalka dibaddiisa safar ugu maqan.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii ay Xoogagga ka soo horjeeda Dowladda Soomaaliya ay weerar madaafiic ah ku qaadeen Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, iyadoo xiligaasna ay garoonka ka dhoofayeen Madaxweynaha iyo Raiisal Wasaaraha Soomaaliya.